Shahaadada PMP - 10 Sababaha Lagu Helo Shahaadada PMP - Iskuulka ITS Tech
Shahaadada PMP - 10 Sababaha Lagu Helo Shahaadada PMP
10 Sababaha loo Sameynayo Shahaadada PMP
Sidee tababarka shahaadada PMP waxtar u leh
PMP iyo Fursada Xirfadaha
Maamulayaasha PMP ayaa la rumeeysan yahay Xirfadaha Sare
Shahaadada PMP waa mid aad u ballaaran
Shahaadada PMP waxay ka dhigeysaa resume aad u jiidasho badan.
Kordhinta Maareynta Maareynta Shaqada waxay ubaahan tahay Shahaadada PMP
Horumarin kormeeraha hormarinta
Waxaad noqon doontaa shakhsi ka soo horjeeda khibradaha ugu caansan
Mashruuca Maareynta Maareynta Mashruuca (PMP) waa mid ka mid ah shahaadooyinka ugu muhiimsan ee warshadaha. Waxa la arkaa oo dhan oo loo dhan yahay oo muujinaya inaad tahay xirfadle, khibrad iyo xirfad u leh berrinka maamulka ganacsiga. Iyada oo ujeedo gaar ah oo ku-meel-gaar ah oo lagu codsanayo waxaad u baahan tahay shahaado afar sano ah (shahaadada Bachelor-ka ama caalamka oo dhan) iyo wax ka yar seddex sano oo ah kulammo maareynta masiibo. Waxaad sidoo kale u baahan tahay saacadaha 4500 ee wadista wadista iyo isdhexgalka oo ay la socdaan saacadaha 35 ee Maareynta Mashruuca. Iyadoo aan loo eegin suurtogalnimada inaadan haysan shahaadada Bachelor, waxaad kari kartaa kiis kasta.
Haddii ay dhacdo in aad haysato xaqiijin taageero ah (dugsiga sare ama caalamka oo la barbardhigo) oo aad haysato wax ka yar shan sano oo ah maamulka kharajka ganacsiga saacadaha 7500 ee isku-duwidda iyo wadista wadista iyo saacadaha 35 ee barashada hirgelinta hirgelinta, waxaad sidoo kale bixin kartaa.
Baaxadda PMP waa mid caadi ah. Waa mid ka mid ah shahaadooyinka aasaasiga ah ee 10 ee meeraha. Shahaadooyinka PMP ayaa si aad ah loogu aqoonsaday ganacsiga. Ururo badan ayaa ka dhigay in loo baahdo PMs-ka si loo xaqiijiyo PMP ama shahaadada saamiga. Marka aad fursad u haysid inaadan haysan shahaadadan markaa laguma tixgelineynin inaad ku qorto PM (Mashruuca Mashruuca). Tani waxay xadayn kartaa xirfaddaada xirfadeed. Waxyaaba kale oo lagu doonayo in la sameeyo PMP waa magdhow. Sida laga soo xigtay Sahanka Miisaaniyadda ee Miisaaniyadda sagaalaad, kuwa haysta shahaadada PMP waxay soo aruuriyaan magdhow (20% korodh iyo ka weyn) kuwa aan lahayn shahaadadan.
Haysashada shahaadada waxay si buuxda u dhigi doontaa mid sahlan si ay u ogaato xirfad ahaan barnaamij ama Mashruuca Mashruuca. Heerka PMP waa mid cajiib ah. Dhammaantood waxay ku saabsan yihiin shahaadooyin caan ah oo la aqoonsan yahay. Sida muuqaal guud oo kala duwan, waa mid ka mid ah shahaadooyinka ugu weyn ee 10 ee meeraha.
Inkastoo tani ay tahay tilmaan si loo xaqiijiyo dhib khaldan, kor u kormeerayaasha tababarrada shahaadada PMP sida caadiga ah waxaa la qaddariyaa inay yeeshaan qorshe dhaqdhaqaaq oo awood leh si loo damaanad qaado guusha hawsha.
Sii Shahaadada Maareynta Mihnadlaha Xirfadaha waa adduunka oo dhan sidoo kale. Waxaa jira waxqabadyo badan oo u baahan madaxyahanno oo la kulmay tababaro PMP ah. Qeyb ka mid ah sawiradu waa naqshad samaynta, dhisidda maareynta, shirkadaha saliidda iyo gaaska, horumarinta, gaadiidka, iyo injineernimada. Iyada oo shahaadada PMP, waxaad ku hogaamin kartaa baakadka.
Haddii aad raadinayso shaqo ku dayasho ahaan ama kormeeraha barnaamijka-ama weli marxalad aad u yaryar ee mihnaddaada ganacsigaaga-Mashruuca Maareynta Maareynta Mashruuca waa shahaad aan caadi aheyn oo lagu daro liistadaada.
Xirfadaha shaqo ee waaweyn, ururo iyo shaqooyin badan ayaa leh shuruud u dhiganta shahaadada PMP, sidaas darteed fursadda aad ujoogsan tahay inaadan aheyn PMP, guud ahaan ma noqon kartid heer sare, iyadoon loo eegin inta sano ee khibrada aad haysato. Waxaa jira waxyaabo dheeraad ah oo ka mid ah horumarkaaga ee dhexmara xiriirkaada iyada oo ah kaalmooyin hirgelinta hirgalinta hirgelinta, sidaas awgeed ururka ayaa sidoo kale faa'iido u leh.
Sida laga soo xigtay Mashruuca Maareynta Maareynta Maareynta Mashruuca Mashruuca Ninth Edition-Mashruuca Maareynta Maareynta Mashruuca (PMP) ee Maraykanka ayaa ka helay heerka caadiga ah ee 22% ka badan kuwa ay ka mid yihiin kuwa aan aqoonsiga lahayn ee 2015.
Waa inaad shaki kaaga dhigtaa ilaha dhaqaalaha ee PMP oo ku saabsan fursadda aad u maleyneyso in aad ka shaqeyneyso berrinka maamulka ganacsiga ee wax kasta oo ka hartay noloshaada. Tani ma ahan mid muujinaysa ballanqaadkaaga oo ujeedadiisu tahay inaad ku hayso booskaaga mudada dheer ee dheeraadka ah waxay kaa caawineysaa inaad barato heerarka sare u qaadista ee muhiimka ah ee arimahan.
Waxay kaa caawineysaa sidii loo hagaajin lahaa kormeeraha hirgelinta iyo faai'inta. Waqtiga oo dhan, markaad dhameysid shahaadadan, waxaad soo qaadataa macluumaadka ku saabsan qalabyada iyo istaraatiijiyooyinka si aad uga dhigto jihadaaga si aad u miro dhal badan. Tani waxay ugu dambeyn dhistaa kalsoonidaada ururka. Waxaad fursad u heli doontaa inaad si wadajir ah u wada shaqeysid iyo nidaamyada nidaamyada khabiirada kale ee maamulka khayraadka ee adduunka oo dhan, taas oo si wanaagsan u dhisi karta khibraddaada guulaha khibrada iyo horumarinta.
Marka la dhameeyo shahaadada PMP, magacaaga ayaa lagu darayaa ururinta ugu weyn uguna sareeya ee xaqiijinta Khabiirada Maareynta Mashruuca.
Marka aad fursad u haysatid inaad ku dhaqaaqdid farsameynta xirfadda, aqoonsiga PMP ayaa kaa caawin kara. Markaad soo qaadato aqoonsi aad u baahan tahay sannado badan oo khibrad ah, waxaad ka bilaabi kartaa gelitaanka meelaha aad ka sarayso oo aad ka bixisid lacagta kale ee aad awoodi kartid inaad sameyso. Shahaadada PMP ma noqon doonto waxa ugu waxtar yar ee aad ku qaban doonto xirfaddaada, hase yeeshee waxay kuu horseedi doontaa si wanaagsan.
Barashada PMP waa mid si toos ah oo toos ah oo wax ku ool ah ITS. Waxay baraysaa hababka hal-abuurka ah ee shaqada waxayna u oggolaataa xubnaha inay ka soo qaataan barashada dhulka hoose ee daweynta kala duwan.
3 Koorsooyin loo adeegsado Mashruuca Maareynta Mihnadda Xirfadaha